“Bixitaanka Messi kaliya ma dhaawici doonto Barcelona” – Ronald Koeman – Gool FM
“Bixitaanka Messi kaliya ma dhaawici doonto Barcelona” – Ronald Koeman
(Barcelona) 09 Luulyo 2021. Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in qandaraaska loo cusbooneysiiyo Lionel Messi inkasta oo dhibaato dhaqaale ay soo wajahday kooxda.
Dhinaca kale tababare Ronald Koeman ayaa xusay in saameynta bixitaanka Lionel Messi aysan kaliya dhaawaci doonin kooxda, laakiin ay sidoo kale dhaawaci doonto horyaalka Spain.
Koeman ayaa muujiyay sida uu kaga walwalsan dib u dhaca ku yimid dib u cusbooneysiinta heshiiska Messi, balse sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyay kalsoonida uu ku qabo Madaxweyne Joan Laporta inuu ugu dambeyn ku guuleysan doono xalinta dhibaatadan.
Haddaba sida uu daabacay wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Cusbooneysiinta Messi? Had iyo jeer marka aan la xallin arrinta waad walwalsanaan doontaa, laakiin kalsooni buuxda ayaan ku qabaa Madaxweynaheena inuu xallin doono dhibaatadan.”
“Waa arin aad muhiim ugu ah kooxda, laakiin sidoo kale waxay muhiim u tahay Horyaalka Spain maxaa yeelay waxaa loo arkaa inuu yahay ciyaaryahanka aduunka ugu fiican, dhamaanteen waa inaan dadaal weyn u galnaa inuu nala sii joogo.”
“Messi marwalba wuxuu muujiyaa inuu doonayo inuu sii joogo Barcelona, waan ogahay in kooxda ay la shaqeyneyso qareenkiisa ama aabihiis si ay heshiis u gaaraan.”
“Wuxuu ciyaarayaa haatan Copa America wuxuuna ka fakarayaa waxyaabo kale, waxaan rajeynayaa inuu ku guuleysto finalka Axadda, Leo had iyo jeer waxa ugu fiican ayuu u qabtay kooxdan waana inuu u sii ciyaaraa, inuu ku soo gabagabeeyo xirfadiisa maaliyada koox kale ma ahan wax wanaagsan.”
Taageerayaasha Liverpool oo helaya war aad u wanaagsan kahor kulammada isku diyaarinta ee xilli ciyaareedka cusub 2021/2022
Horudhac: Argentina vs Brazil... (Messi iyo xulkiisa oo doonaya inay soo af-jaraan abaar daba-dheeraatay & Neymar Jr oo rajeynaya inuu Brazil la qaado Copa America markiisii ugu horreysay)